China Steel Fitness Equipment Arc ịgbado ọkụ robot emeputa na Supplier |Yunhua
Robot nke Yooheart kacha mma.
- Ogologo ogwe aka: 1450mm
- Ọkụ: Ọkụ na-ekpo ọkụ gas maka 350A ugbu a
- Ọ dị mfe ịmụta na ịrụ ọrụ
A na-ejikarị rọbọt eme ihearc ịgbado ọkụ, na elu ntụkwasị obi na magburu onwe uru maka ego.Robot ịgbado ọkụ oghere structural ogwe aka na nkwojiaka, ịgbado ọkụ robot arụnyere na ịgbado ọkụ cable, ike ịrụ ọrụ ịgbado ọkụ usoro na warara oghere, fechaa, kọmpat Ọdịdị.
Robot ịgbado ọkụ site na ịwụnye mkpuchi nchebe, ị nwere ike ijide n'aka na enwere ike iji ya na gburugburu ebe dị njọ (uzuzu na ntapu).Robot ịgbado ọkụ nnukwu ebe ọrụ, ịgbado ọkụ robot ngwa ngwa na-agba ọsọ ọsọ, ịgbado ọkụ robot elu ikwugharị n'ọnọdu ziri ezi, adabara àgwà na-achọ ịgbado ọkụ ngwa.
Q. Enwere ike iji robot ịgbado ọkụ Mig maka ịgbado ọkụ Aluminom?
A. Enwere ike iji robot ịgbado ọkụ Mig maka Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara, Aluminom ịgbado ọkụ.Ihe dị iche bụ robot ga-ahazi welder dị iche iche iji zute ihe dị iche iche.
Q. Enwere ike Mig ịgbado ọkụ robot jikọọ ọzọ ika welder?
A. Robot ịgbado ọkụ Mig nwere ike jikọọ dị iche iche ika welder dị ka OTC, Lincoln, Aotai, Megmeet wdg Megmeet&Aotai bụ anyị mmekorita ika, nke mere na ihe niile mbụ ejikọrọ welder bụ Megmeet/Aotai.Ndị ahịa ga-eme ya n'onwe ha ma ọ bụrụ na achọrọ welder ika ọzọ.
Q. Enwere ike Mig ịgbado ọkụ robot jikọọ mpụga axis?
A. Robot ịgbado ọkụ Mig nwere ike jikọọ axis mpụga.Enwere ike ijikọ axis 3 ọzọ ma axises ndị a nwere ike imekọrịta na robot.Enwere ike ijikọ axis ọzọ site na PLC, robot ga-ejikwa ha site na izipu na ịnweta akara site na bọọdụ I / O.
Q. ọ dị mfe ịmụta robot mmemme?
A.dị mfe ịmụta, naanị mkpa 3 ~ 5 ụbọchị, a ọhụrụ ọrụ nwere ike mara otú mmemme robot.
Q. Ị nwere ike ịnye ngwọta ịgbado ọkụ Mig zuru oke?
A. ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye nkọwa gbasara mpempe ọrụ, onye ọrụ anyị nwere ike chepụta ngwọta zuru oke maka gị.Anyị ga-ana 1000 USD maka nhazi ngwọta ọ bụla.
Nke gara aga: Robot ịgbado ọkụ 6 axis Mig maka akwa nchekwa
Osote: Ụlọ ọrụ China Carbon Steel Sheet Metal Metal Fabrication Plasma ịkpụ Robot
ezigbo mma cnc ụlọ ọrụ mmepụta ihe
robot ịgbado ọkụ dị ọnụ ala